चीनबाट आउने भयो खरिदको खोप ,असार २४ गतेदेखि साप्ताहिक रूपमा आपूर्ति हुने - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार चीनबाट आउने भयो खरिदको खोप ,असार २४ गतेदेखि साप्ताहिक रूपमा आपूर्ति हुने
सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मसँग कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सिनोफार्म कम्पनीसँग खोप खरिदका लागि सम्झौता भएको जनाएका हुन् ।
‘पछिल्लो समय खोप प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट चीनको बेइजिङस्थित सिनोफार्म कम्पनीसँग खोप खरिदका लागि भएको सम्झौताअनुसार २४ असारबाट आपूर्ति सुरु भई तत्पश्चात् साप्ताहिक रूपमा विभिन्न चरणमार्फत खोप आपूर्ति गर्ने तयारी भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि सरकारले छिमेकी देशहरु चीन, भारत र कोभ्याक्स सुविधामार्फत ४२ लाख ४८ हजार मात्रा खोप प्राप्त गरी खोप अभियान सञ्चालन गरेकाे थियाे ।
स्रोतका अनुसार खोप लिन २४ असारमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज बेइजिङ जाँदै छ । चीनबाट कति मूल्यमा कति डोज खोप खरिद गरिएको भन्ने सरकारले खुलाएको छैन । चिनियाँ कम्पनीसँगको ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ अनुसार मूल्य सार्वजनिक नगरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
चीनले देशअनुसार फरक–फरक मूल्यमा खोप बिक्री गरेको छ । मूल्य भने सार्वजनिक गरेको छैन । श्रीलंकालाई उपलब्ध गराएको मूल्यभन्दा सस्तोमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने अपेक्षा नेपालको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार १५ डलरभित्रमा नेपालले खोप पाउने सम्भावना छ । चीनले पनि १४ देखि १७ डलरको आसपासमा उपलब्ध गराउने संकेत गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २५ लाख ७४ हजारभन्दा धेरैले कोरोनाविरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका छन् । यस्तै, ७ लाख ५७ हजारभन्दा धेरैले खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका छन् ।
Previous articleनारायणगढदेखि काठमाडौंसम्म ७ ठाउँमा पहिरो, ४ सवारी पुरिए, १ जनाको मृत्यु
Next articleटिकटकद्वारा झन्डै ७३ लाख प्रयोगकर्ताको अकाउन्ट निलम्बन